China Soft bristled borosy borosy borosy nify sy mpanamboatra | Enyuan
Borosy borosy nify boribory somary volo
Ity borosy nify loha ity dia manana volom-borona sy volom-borona miorim-paka, izay misy voka-dratsy miady amin'ny bakteria. Ny volon'ny volon'ondry hafa dia mifangaro, malefaka ary mahery, ary afaka mandray anjara amin'ny famotsorana, ny siligaoma ary ny fanorana.
anaran'ny vokatra Borosy borosy nify
Fitaovana boribory Pbt
antsipirian'ny vokatra ： Famolavolana vatana malalaka vaovao
Fisondrotana 150% amin'ny faritra madio
+ 30% volom-borona mirehitra sy matevina, manatsara ny fahombiazany
-10% Ny hatevin'ny lohan'ny borosy ho an'ny fanadiovana lalindalina kokoa
Lavaka 48 fanampiny, manotra landy malefaka hambolena siligaoma tsara
Tanana borosy ergonomika
Famolavolana varimbazaha amin'ny fihazonana,
Mora hitazona ary milamina kokoa
Ny borosy borosy nify malalaka dia afaka mampitombo be ny faritra ifandraisany amin'ny nify. Rehefa mbola mampiasa borosy nify nentim-paharazana ianao dia tsy afaka manarona nify roa fotsiny eo amin'ny laharana ambony na ambany. Mandany fotoana sy be asa, na dia tsy mitovy aza ilay borosy. Soloy borosy nify doha malalaka 14% ny loha, ary afaka mifanoroka nify roa miaraka amin'ny fotoana iray ianao. Mitsitsy ny fotoana fanasana sarobidy ary mahatonga ny fanadiovana ho bebe kokoa. Tombony iray hafa amin'ny loha malalaka ny hoe afaka manotra ny siligaoma koa izy rehefa manadio nify. , Mampiasa volom-borona pbt izahay. Na dia miantoka ny fahamendrehana sy ny halemem-panahy aza izy ireo, ny volo PBT dia afaka manadio lalina ny banga misy eo amin'ny siligaoma. Ny tahan'ny fandraisana rano dia ambany, ny hafainganam-pandeha haingam-pandeha, ary ny bakteria dia tsy mora miteraka. Ny eo afovoan'ny borosin-tànana sy ny tapany afovoany sy ny farany ao aoriany dia afangaro amin'ny pady malefaka, miaraka amina modely fanoherana ny hoditra, mba hihazonanao mafy kokoa ny nifinao.
1. Aza mampiasa hery be loatra rehefa miborosy nify hisorohana ny olana toy ny fanosihosan'ny enamel nify sy fahasimbana amin'ny siligaoma.
2. Samy hafa ny bakteria am-bava. Mba hisorohana ny fifanakalozana tsiranoka amin'ny vatana sy bakteria dia tsy asaina afangaro borosy nify. Indrindra rehefa misy ratra eo am-bava, dia mora ny mijaly amin'ny aretina azo avy amin'ny hery fiarovan'ny vatana na aretina sasany.
3. Ny bristles dia tonta sy simba, ny fahaiza-manadio dia hihena be. Amin'ny ankapobeny, ny borosin'ny borosy nify dia 3-4 volana.
Previous: Ny borosy borosy volom-bolo polymer avo dia miaro ny siligaoma
Manaraka: Borosy nano avo lenta ho an'ny trano an-trano
Polymer Tpu boribory boribory boribory avo dia miaro ...